८ वर्षीय बालकको हत्या जस्ले गरे शब उसैले देखा ए ! यस्तो छ घटनाको बेलिबिस्तार - Maxon Khabar
Home / News / ८ वर्षीय बालकको हत्या जस्ले गरे शब उसैले देखा ए ! यस्तो छ घटनाको बेलिबिस्तार
८ वर्षीय बालकको हत्या जस्ले गरे शब उसैले देखा ए ! यस्तो छ घटनाको बेलिबिस्तार
काठमाडौं गोंगबुका त्रिवेणी गेस्ट हाउसका सञ्चालक प्रवीण कुँवरका ८ बर्ष का छोरा प्रयास कुँवर मंगलबार साँझबाट संपर्क बिहिन भएका थिए । मंगलबार साँझतिर प्रवीण र आमा दुवै नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि निस्कनेबित्तिकै उनका छोरा हराएका थिए ।
त्यही बेला 1 महिनाअघि मात्र होटलको गाडीको चालकका रूपमा काम गर्न आएका स्याङ्जाका ड्राइभर महेन्द्र एसके होटेल मा थिएनन । त्यसपछि उउन्का बाबले महेन्द्रलाई फोन गरे तर फोन लागेन महेन्द्रलाई ७ बजेर ४९ मिनेटमा अचानक फोन लाग्यो । उनले प्रयास आफूसँग नभएको बताएपछि आत्तिएका प्रवीणले प्रहरीमा निबेदन गरे ।
त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानमा निज महेन्द्रले पनि प्रहरी लाई २ दिनसम्म सघाएका थिए । सुरुमै प्रहरीले महेन्द्रसँग बायान पनि लिएको थियो उनको बयान र मोबाइलको लोकेसन फरक–फरक भएपछि प्रहरीले उनलाई शंका को घेरा मा राखेको थियो । प्रहरिले ले उनको मोबाइल लोकेसनअनुसार अनुसन्धान गर्दा उनी नागार्जुन जंगलमा गएको र फिर्ता भएर म्हैपीमा आएको पत्ता लगायो ।
बिहीबार बिहान केरकार गरेपछि उनले बालक आफैँले अपहरण गरी हत्या गरेको र शव म्हैपीमा फालेको बयान दिए । त्यस्पछी प्रहरीले बिहीबार सो स्थानबाट बालकको शव निकाल्यो । एसएसपी धीरजप्रताप सिंहका अनुसार प्रवीणले उनलाई जागिरबाट निकालिदिनेचेतावनी दिएको कारणले बालकको हत्या भएको हुनसक्ने बताए । उनका अनुसार गोंगबु क्षेत्रका अन्य होटलमा समेत काम गरिसकेका महेन्द्रले मन्लागी गाडी लैजाने र भनेअनुसार नगर्दा प्रवीण र उनीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
बालक समेतसँग महेन्द्रको राम्रो सम्बन्ध थिएन । घटनाका दिन चकलेट खान दिएर महेन्द्र ले फकाएका थिए,’ एसएसपी सिंहले भने, ‘ हामीलाई नै सहयोग गरेको नाटक गरिरहेका थिए ।’ २०७५ कात्तिक १० गतेदेखि प्रवीणको गेस्ट हाउसमा मासिक १४ हजार रुपैयाँ तलबमा ड्राइभरको काम गरेका उनले
सेवा सुविधा बढाइदिन अनुरोध समेट गरेका थिए ।
उनले अपहरण गरेका बालकलाई गाडीमै राखी मित्रनगरस्थित डिआर फेन्सी स्टोर्सबाट जेब्रा झोला र नजिकैको अर्को पसलबाट दुईवटा प्लास्टिकका झोलासमेत किनेर लगेका थिए । त्यसपछि उनले नागार्जुनको जंगलमा लगी बालकको नाक, मुख र घाँटी थिचेर हत्या गरेको र प्लास्टिकमा बेरेर जेब्रा झोलामा हाली म्हैपीस्थित खोलामा फालेको बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि, प्रहरीले महेन्द्रमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।